विष्णु रिमाललाई प्रश्न- महाधिवेशनमा खर्चको जोहो कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? « Nepali Bahas
विष्णु रिमाललाई प्रश्न- महाधिवेशनमा खर्चको जोहो कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
यतिखेर सबैको ध्यान नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशनतिर गएको छ । पर्यटकीय नगरी चितवनमा यही मंसिर १०–१२ गते सम्पन्न हुने दशौं महाधिवेशनको खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेता विष्णु रिमाललाई छ । आर्थिक कमिटीका संयोजक रिमालले महाधिवेशनमा ७ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गर्नु भएको छ । महाधिवेशन तयारीसँगै आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा केन्द्रित रही मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः